culte | fivavahana,divers | samihafa,fkmsm,nouvelles | vaovao
03|02|08 – Fanavaozana komity [Genève, CH]
Hisy fotoam-pivavahana iraisam-pinoana Malagasy [Fiangonana Kristiana Malagasy eto Soisa sy ny Manodidina, FKMSM] , ny Alahady 3 febroary 2008 , amin’ny 3 ora hariva ao amin’ny fiangonana protestanta Servette, [avenue Wendt 55, Genève].
– Marihina fa amin’io fotoana io no hanavaozana ny komitin’ny fiangonantsika ka tongava maro ary mangataka antsika sahady hitondra am-bavaka izany fotoana izany.
03 febroary 2008
agenda, antsika, chrétien, comite, culte, fiangonana, fkmsm, gasy, genève, kristiana, mail, malagasy, malgache, nouvelles, Paroisse, soisy, suisse, vaovao
divers | samihafa,fkmsm,nouvelles | vaovao
Fanambarana t@ Taona 2002
15 Fév , 2002
“Manoloana ny zava-misy amin’izao fotoana izao any Madagasikara, ny FKMSM dia:
Tsy miandàny na amin’iza na amin’iza,
Mitaona ny tompon’andraikitra tsirairay avy ho amin’ny fifanakalozan-kevitra (dialogue) sy ny fifampiraharahana (négociation) mba hivoahan’ny firenena amin’izao zava-misy ankehitriny izao,
Manohana sy manentana ny rehetra hiara-mivavaka,
Vonona handray anjara amin’izay mety ho fanampiana ara-tsoasialy ny vahoaka Malagasy araky ny fepetra mifehy ny Fiangonana.”
agenda, chrétien, fiangonana, fkmsm, gasy, kristiana, Madagasikara, malagasy, malgache, nouvelles, soisy, suisse, taona, vaovao, vavaka
Vaovao Janoary 2002
1) Miarahaba anao mpitsidika, tratran’ny izao taona vaovao izay, ary mirary anao ny fitahiana sy ny fiarovan’ny Tompo lalandava eo amin’ny fiainanao, ny andraikitra izay sahaninao, ny fianaranao raha mpianatra ianao. Maniry koa ny fifaliana sy ny fiadanan’ny Tompo ho aminao.
2 ) Misaotra an’Andriamanitra fa tanteraka soa-aman-tsara ny fanompoam-pivavahana tamin’ny alahady voalohany amin’ny taona 2002 izay natao tao amin’ny Paroisse d’Ecublens. Misaotra koa ireo mpanompony dia ny fianakaviana Rakotolehibe Mamy sy Seheno izay nitarika ny fotoana ary i Pasteur Arintsoa izay nampandray.
3) Ny chorale Valihan’i Jehovah dia hihira ao Prilly (Lausanne-Ouest) amin’ny alahady 20 janoary amin’ny 9h45 ary manasa antsika rehetra hanotrona azy ireo.
4) Ny fiangonana advantista dia manasa antsika hiara-mivavaka amin’ny teny malagasy ny asabotsy isaky ny fahatelon’ny volana (19 janoary ny manaraka) ao Collonges sous Salève (Frantsa).
5) Nahazo fanasana isika avy amin’ny Décennie « Vaincre la Violence » izay anaovana valan-dresaka ary arahana fanompoam-pivavahana eran’ny Suisse romande:
Lausanne: Salle des Terraux amin’ny talata 22 janoary , 17h – 20h
Genève: Alahady 20 janoary amin’ny 14h30
6) Noho ny fiovan’ny vola ho Euros dia tsy afaka ho raisina intsony amin’ny rakitra ny vola majinika FF na DM na Lire. Ny antony dia amin’ity volana janoary ity no havadika Euros ny rakitra FF rehetra eo am-pelatanana. Tamin’iny alahady 6 janoary iny koa no nilazana ny mpiangona ny toe-bolan’ny FKMSM nandritr’iny taona 2001 iny. Tsara ho fantatra fa amin’ny fanafarana raiamanreny ara-panahy dia mbola 2’660.-CHF ary 30.49 Euros (na 200.-FF) ny vola
agenda, antsika, chorale, chrétien, Ecublens, fiangonana, fkmsm, gasy, genève, kristiana, lausanne, malagasy, malgache, nouvelles, Paroisse, soisy, suisse, taona, valiha, vaovao, vavaka
Vaovao Jona 2003
1) Noho ny filaharana fanoherana ny G8 teto Genève, dia voatery nanondidina 60 Km Atoa Claude ROBEL vao tafiditra teto Suisse. Na dia tara aza anefa ny fanombohan’ny fampianarana famakiana Baiboly dia tanteraka ihany izany. Izay tsy afaka nanatrika io fampianarana io dia afaka maka ny diaporama eto (tsindrio ny bokotra ankavanana). Mbola hisy tohiny ity fampianarana ity (exercices pratiques) ka any amin’ny septambra any no noeverina hanaovana an’izany.
2) Misaotra an’i Andriamatoa Randrianarijaona Ambinintsoa tamin’ ny ny fitarihana ny fotoam-pivavahana sy ny hafatra izay nozarainy tamintsika; izy rahateo moa no tompon’andraikitra tamin’ny fikarakarana ny fotoam-pivavahana. I Pastera Arintsoa Zafindriaka dia tsy afaka nanatrika ny fotoana noho ny tazo izay nitazona azy teo am-pandriana (misy gripa mahery miserana eto Suisse amin’izao fotoana izao ka maro no tratrany).
3) Ny rakitra farany tamin’ny 4 may tany Lausanne/Ecublens dia nahatratra 109.65 CHF ary 2.25 Euros.
4) Natao toa aorianan’ny filazan-draharaha ny fiarahabana sy firariantsoa an’i Toky sy Felena Rabemanantsoa izay nahazo zazavavy: Irikanto .
5) Misaotra an’i Atoa Toky Rabemanantsoa izay nanaiky nitarika sy nizara ny tenin’Andriamanitra tamin’ ny alahadin’ny Pentekosta. Ny tompon’andraikitra moa dia Rtoa Lala Randriamiharisoa. Ny mpampandray dia i Pastora Arintsoa Zafindriaka.
6) Ny rakitra farany tamin’ny 1 jona tany Genève dia 118.10 CHF ary 0.50 Euro.
7) Tao aorian’ny fotoam-pivavahana dia nampisehona ny mpiangona ny peta-drindrina izay handravahana ny stand-ny FKMSM amin’ny 21 jona any Meyrin/Genève miaraka amin’ireo fikambanana malagasy hafa manerana ny Suisse. Mbola nisy fangalana ny sarin’ny mpiangona sy ny komity koa tamin’io andro io.
8) Tanteraka soa aman-tsara ny fotoam-pivavahana ekiomenika ho fankalazanan ny fetim-pirenena malagasy izay natao tao amin’ny Centre paroissial oecuménique de Meyrin ny asabotsy 2 jona 2003 ary nandraisan’ny faingonana Advantista, FJKM, FKMSM ary Katolika anjara. Ny nitarika ny fotoana dia ny pastora Louis Norbert Rakotonanahary ary ny nitondra ny sakafo-panahy dia ny pastora Samoely Lala James: « Sambatra ny firenena izay manana an’i Jehovah ho Andriamaniny », (Sal. 33:12a). Maro ny olona avy any Frantsa manodidina sy lavidavitra no tonga nanatrika ny fanompoam-pivavahana na dia tamin’ny folo ora maraina aza ny fanombohana. Ny antoko mpihira tamin’ireo fiangonana efatra dia niara-niredona teo am-piandohana ilay: « Faly aho ».
9) Ny fiangonana manaraka dia amin’ny 6 jolay ao amin’ny Paroisse protestante de Plan-les-Ouates, Genève. Ny mahatonga io fiovana io dia satria mihidy ny Paroisse de Servette mandritry ny vola jolay.
10) Ny rakitra farany tamin’ny 8 jona (Pentecôte) tany Lausanne dia nahatratra 140.95 CHF.